सद्‌गुरुः यो लगभग ३०० वर्ष अगाडिको कुरा हो । भारतको कर्नाटकमा दक्षिण क्षेत्रतिर एकजना भक्त बस्दथे । उनको आमाको उमेर ढल्किँदै थियो । उनी काशी जान चाहन्थिन् र विश्वनाथको काखमा (शिवको काखमा) प्राण त्याग्न चाहन्थिन् । उनले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै केही कुरा मागेकी थिइनन्, तर यो एउटा कुराको लागि उनले आफ्नो छोरासँग आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “मलाई काशी लैजाऊ । म बुढी हुँदै छु । म त्यहाँ गएर मर्न चाहन्छु ।"
"मलाई थाहा छैन, किनकि मैले उहाँलाई देखिनँ । मैले कपडा मात्र देखेँ, त्यसभित्र कुनै अनुहार थिएन । त्यहाँ केही पनि थिएन, त्यो खाली थियो ।”
उसले आफ्नी बुढी आमालाई लिएर जङ्गलको बाटो हुँदै दक्षिण कर्नाटकबाट काशीतर्फ लाग्यो— निकै लामो दुरी ! बुढी भएकीले आमा बिरामी परिन् । त्यसैले, उसले आफ्नी आमालाई काँधमा बोकेर हिँड्न थाल्यो, अनि अवश्य नै केही समयपछि उसको ऊर्जा रित्तिँदै गयो । तर, ऊ एउटै तरिकाले आफूलाई हिँडाइरहेको थियो—शिवसँग अनुनय विनय गरेर, “शिव, कृपया मलाई यो एउटा प्रयासमा असफल हुन नदिनुहोस् । मेरी आमाले मसँग यही एउटा कुरा माग्नु भएको छ, मलाई यो पूरा गर्न दिनुहोस् । म उहाँलाई काशीसम्म पुऱ्याउन चाहन्छु । हामी त्यहाँ केवल तपाईंको निम्ति आइरहेका छौँ । कृपया मलाई शक्ति दिनुहोस् ।"
त्यस व्यक्तिले भन्यो, “मेरी आमालाई सञ्चो छैन । के हामी तपाईंको यो खाली गाडामा चढ्न सक्छौँ ?" चालकले हुन्छ भन्ने सङ्केत दियो । उनीहरू दुवैजना चढे अनि गाडा चल्न थाल्यो । केही समयपछि, उसले यो चाल पायो कि जङ्गलको बाटोमा पनि गाडा निकै आरामपूर्वक चलिरहेको थियो । उसले तल हेऱ्यो अनि देख्यो— चक्काहरू घुमिरहेका थिएनन् । ती अचल थिए, तर गाडा चलिरहेकै थियो ! त्यसपछि, उसले गोरुलाई हेऱ्यो; गोरु बसिरहेको थियो, तैपनि गाडा चलिरहेको थियो । अनि, उसले चालकतर्फ हेऱ्यो । छोप्ने कपडा मात्र देखिएको थियो, तर त्यसभित्र कोही पनि थिएन । उसले आफ्नी आमातिर हेऱ्यो । आमाले भनिन्, “अरे मूर्ख ! हामी त्यहाँ पुगिसक्यौँ । अब अन्त कतै जान जरूरी छैन । यही त्यो ठाउँ हो, मलाई जान देऊ ।" अनि, आमाले ठीक त्यहीँ आफ्नो शरीर त्यागिन् । गोरु, गाडा र चालक सबै अदृश्य भए !
ऊ गाउँ फर्कियो । मानिसहरूले सोच्न थाले, “यो यति छिटो फर्किएको छ । यसले आफ्नी आमालाई बाटोमै कतै मिल्काएर आएको हुनुपर्छ । यसले पक्कै पनि उनलाई काशी लगेन।" उनीहरूले उसलाई सोधे, “आफ्नी आमालाई कता छोडेर आइस् ?” उसले भन्यो, “होइन, हामी कतै जानै परेन, शिव स्वयं हाम्रो निम्ति आउनुभयो ।" उनीहरूले भने, “वाइयात कुरा !” उसले भन्यो, “तपाईंहरूले जेसुकै सोचे पनि त्यसले केही फरक पार्दैन । उहाँ हाम्रा लागि आउनुभयो, र त्यही सबैथोक हो । मेरो जीवन जगमग भएको छ । त्यो कुरालाई मैले आफूभित्र अनुभव गरेको छु । यदि तपाईंहरूले त्यसलाई अनुभव गर्नुभएको छैन भने, त्यो तपाईंहरूको समस्या हो ।" त्यसपछि, उनीहरूले सोधे, “ठीक छ, त्यसोभए हामीलाई केही देखाऊ । हामीलाई कुनै न कुनै तरिकाले यो प्रमाणित गर कि तिमीले साँच्चिकै शिवलाई देखेका थियौ वा उहाँ तिम्रो निम्ति आउनुभएको थियो ।" उसले भन्यो, “मलाई थाहा छैन, किनकि मैले उहाँलाई देखिनँ । मैले कपडा मात्र देखेँ, त्यसभित्र कुनै अनुहार थिएन । त्यहाँ केही पनि थिएन, त्यो खाली थियो ।"
मल्लाः शिव–भक्त साथै एक चोर पनि !
शिव शिकारी थिए । उनले जनावरहरूलाई मात्र नभई मानिसहरूलाई समेत धराप वा जालमा पार्दथे ।
जुन जङ्गलको बाटो मानिसहरू आवात-जावत गर्दथे, उनी त्यस ठाउँको नियमित लुटेरा बनेका थिए । जुन ठाउँमा बसेर उनी शुल्क उठाउने गर्दथे, त्यो स्थानलाई ‘कल्लनमूलई' अर्थात् 'चोरको अड्डा' भनेर चिनिन्थ्यो । शुरु–शुरुमा मानिसहरूले उनलाई तथानाम भनेर सराप्ने गर्थे, तर जब बर्षको अन्तिम समय आउँथ्यो, आफूले लुटेको सम्पूर्ण धन महाशिवरात्रिको उत्सव मनाउन खर्च गरिन्थ्यो । उनले सबैका लागि भोजभतेर आयोजना गर्दथे ।
केही वर्षपछि, दुईजना योगीहरू (जो भाइहरू थिए) त्यहाँ आए अनि यस व्यक्तिलाई देखे जो लुटेरा थिए, साथै महान् भक्त पनि थिए । उनीहरूले भने, "तिम्रो भक्ति अद्‌भुत छ, तर तिम्रा तरिकाहरूले मानिसहरूलाई आघात पुऱ्याइरहेको छ ।" उनले जवाफ दिए, "म यो सबै केवल शिवको लागि गरिरहेको छु, यसमा के समस्या छ र ? उनीहरूले मल्लालाई राम्रोसँग सम्झाए, उनलाई छुट्टै बसाले अनि निश्चित विधिहरूमा दीक्षित गरे— अनि, त्यो ठाउँलाई कल्लनमूलई बाट मल्लनमूलई मा नामाकरण गरिदिए । आज पनि त्यो ठाउँलाई मल्लनमूलई भन्ने गरिन्छ । त्यहाँ उनले शुरु गरेका महाशिवरात्रि उत्सव त्यो स्थानमा ठूलो पर्व बन्न पुग्यो ।
कुबेर, जो शिवको "महान्" भक्त बने
उनले गणपतितर्फ ईशारा गरेर भने, “यो बालक जतिबेला पनि भोकाइरहन्छ । उसलाई राम्रोसँग खुवाउनू ।"
एकदिन कुबेर शिव समक्ष आए अनि भने, “म तपाईंको लागि के गर्न सक्छु ? म तपाईंको निम्ति केही गर्न चाहन्छु ।" शिवले भने, “तिमीले मेरो लागि केही पनि गर्न सक्दैनौँ । तिमी मेरा निम्ति के नै गर्न सक्छौ र ? किनकि, मलाई केही पनि आवश्यक छैन । म यत्तिकै ठीक छु । बरु, मेरा छोरालाई लैजाऊ ।" उनले गणपतितर्फ ईशारा गरेर भने, “यो बालक जतिबेला पनि भोकाइरहन्छ । उसलाई राम्रोसँग खुवाउनू ।"
“यसमा कुनै समस्या छैन" भनेर उनले गणपतिलाई बिहानको भोजनको लागि लिएर गए । उनीहरूले खाना पस्किए, गणपतिले खाए, फेरी खाए अनि केवल खाइरहे । उनीहरूले पस्किरहे, उनले खाइरहे । कुबेरले सयौँ भान्सेहरू डाके अनि विशाल मात्रामा खाना पकाउन शुरु गरियो । उनीहरूले सबै खाना पस्किए, तैपनि गणपतिले खाइरहे ।
कुबेर भयभीत भए अनि भने, “बन्द गर यो ! यदि तिमीले यसरी खाइरह्यौ भने तिम्रो पेट फुट्नेछ ।" गणपतिले भने, “तिमी चिन्ता नगर । मसँग पेटिको रूपमा यो सर्प छ । तिमीले मेरो पेटको चिन्ता लिनु पर्दैन । म भोको छु । भोजन पस्किऊ । तिमीले नै मेरो भोकको ख्याल राख्न्छु भनेका थियौ, होइन र ?
कुबेरले आफ्नो भएजति सम्पति खर्च गरे । यस्तो भनिन्छ कि उनले अर्को संसारबाट खाना ल्याउनको लागि मानिसहरूलाई त्यहाँ पठाए । तर, गणपतिले खाइरहे अनि भने, “म अझै अघाएको छैन, खै मेरो खाना कहाँ छ ?” त्यसबेला, कुबेरले आफ्नो बुद्दिको सीमितता बुझे र शिवको अगाडि झुकेर नमन गरे, “मलाई यो बोध भयो कि मेरो सम्पत्ति धुलोको कण बराबर पनि छैन । मैले आफूलाई महान् भक्त ठान्ने गल्ती गरेँ । तपाईंले मलाई जे–जति दिइसक्नु भएको छ, मैले त्यसैबाट अलिकति मात्र दिएको हुँ ।" त्यस क्षणपछि उनको जीवन पूर्णतया फरक दिशामा अघि बढ्न थाल्यो ।
अर्धनारीको रूपमा शिव र भृगु महर्षि
यतिबेला सम्म पार्वती रिसले आगो भइसकेकी थिइन्, त्यसैले शिवले उनलाई आफुभित्र ताने र आफ्नै हिस्सा वा अंश बनाए...
शिव यो दृश्यले अचम्मित भए, तर पार्वती अचम्मित भइनन् । उनलाई यो राम्रो लागेन । उनले शिवतर्फ हेरिन, शिवले भने, “अलि नजिक आऊ, ऊ तिम्रो वरिपरि पनि जानेछ ।" पार्वती नजिकै गइन् । शिवको वरपर मात्र परिक्रमा गर्न पर्याप्त ठाउँ नदेखेपछि, भृगुले आफूलाई एउटा मुसामा रूपान्तरित गरे अनि केवल शिवको वरपर घुमे, पार्वतीलाई परिक्रमाभन्दा बाहिरै छोडे ।